သရဏံဂုံအကြောင်း သိကောင်းစရာ - ရတနာဝါသ ဘုရားကျောင်း 華緬 三寶寺
Posted by ukkmaung on December 28, 2012 at 12:30pm
ဘုန်းကြီးတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေ သီလစောင့်တည်တိုင်း သရဏံဂုံ တည်တဲ့အခါ ဓမ္မံသရဏံ ဂစ္တာမိ လို့ ဆိုကြတယ်။ ဤတရားသည်သာလျှင် ကိုးကွယ်ရာလို့ ဒီအဓိပ္ပာယ်တော့ သိပါလိမ့်မယ်။ သို့ သော်ဒီ့ ထက်ပိုလေးနက်တဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကိုသိဖို့ ရာ ဘုန်းကြီးအကျယ်ဟောပါ့မယ်။ ဓမ္မ ဆိုတဲ့စကားလုံးကို ပါဠိဘာသာမှာ ပါရှိတဲ့စကားလုံးဖြစ်လို့ မြန်မာလိုပြောမယ်ဆိုရင် သဘာဝတရားလို့ အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ ဓမ္မ ဆိုတဲ့သဘာဝတရားဟာ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကမှ ပိုင်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူး။ လောကကြီးမှာရှိတဲ့ လူအားလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ သဘာဝတရား။ သဘာဝတရားဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိတယ်။ ဓမ္မံသရဏံ ဂစ္တာမိ ဓမ္မကို ကိုးကွယ်ရာဟူ၍ ဆည်းကပ်ပါ၏။ အဲလို ပါးစပ်ကဆိုလိုက်ရုံနဲ့ ဓမ္မံသရဏံ ဂစ္ဆာမိ ကိစ္စပြီးသွားပလား ? ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ရောက်မှ ၊ ဘယ်အတိုင်းအတာထိရောက်မှ ဓမ္မံသရဏံ ဂစ္တာမိ ဆိုတာ ပြီးပြည့်စုံမလဲ ဆိုတာ ဘုန်းကြီးတို့ မသိသင့်ဘူးလား။ သိသင့်ပါတယ် ဘုရား။
မြတ်စွာဘုရားက ဓမ္မကိုဟောတယ်ဆိုတာ ဒီ ဓမ္မဆိုတဲ့သဘာဝတရားတွေဟာ မြတ်စွာဘုရားပွင့်လာမှ ရှိလာတာမဟုတ်ဘူး။ ရှေးတုန်းကတည်းက ဒီသဘာဝတရားတွေဟာ ရှိနေတယ်။ အမြဲတမ်းရှိနေတဲ့ မှန်ကန်တဲ့သဘာဝတရားတွေ။ ထိုသဘာဝတရားတွေဟာ ထူးခြားတဲ့အသိဥာဏ်ရှိတဲ့ ဗုဒ္ဓ ဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်လာမှ ဗုဒ္ဓက ထုတ်ဖော်ရှင်းပြခဲ့တာ။ ဗုဒ္ဓ ဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်မပေါ်ခဲ့ရင် ဓမ္မ ဆိုတဲ့ သဘာဝတရားတွေကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံရှင်းပြနိုင်တဲ့သူရှိမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ ဗုဒ္ဓကသာလျှင် ဓမ္မကိုပြည့်ပြည့်၀၀ ရှင်းပြနိုင်တာ။ သို့ သော် ဓမ္မ ဆိုတာ လောကကြီးမှာ အမြဲရှိနေတဲ့ The Law of Nature ။ မြတ်စွာဘုရားက ဓမ္မ ကိုတီထွင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ မြတ်စွာဘုရားက ဓမ္မကိုတွေ့ ရှိတာသာ ဖြစ်တယ်။ ဖန်တီးသူ မဟုတ်ဘူး။ တစ်နည်းအားဖြင့် တွေ့ တယ်ဆိုတာ သိရှိသူ။ အဲဒါကြောင့်မို့ ဗုဒ္ဓ ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကိုက အမှန်တရားကိုတွေ့ ရှိသူလို့ အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ သာမန်သိတဲ့လူကို ဗုဒ္ဓလို့ မခေါ်နိုင်ဘူး။ အမှန်တရားကို အားလုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံ ခြွင်းချက်မရှိသိတဲ့လူကိုသာ ဗုဒ္ဓ လို့ ခေါ်တာ။
ဒါကြောင့်မို့ လို့ သရဏံဂုံသုံးပါးမှာ ဒီ ဓမ္မကိုထုတ်ဖော်ဟောပြောနိုင်တဲ့ ၊ ဓမ္မကိုတွေ့ ရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်မို့ လို့ဗုဒ္ဓံသရဏံ ဂစ္တာမိ လို့ ဆိုကြတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီ ပုဂ္ဂိုလ်အရှင်သူမြတ်တွေ့ ရှိခဲ့တဲ့ တရားကို ဓမ္မံသရဏံ ဂစ္တာမိ လို့ ဒီလိုဆိုတယ်။ အဲဒီ မြတ်စွာဘုရားတွေ့ ရှိတဲ့ ဓမ္မတွေကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးလို့ ပေါက်မြောက်သွားတဲ့အဖွဲ့ အစည်းတစ်ရပ်ကို သံဃံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ လို့ ဒီလိုဆိုကြတယ်။ ဒါကိုပဲ ရတနာသုံးပါးလို့ ဒီလိုပြောဆိုကြတယ်။ သရဏံဂုံသုံးပါးလို့ လည်းပြောကြတယ်။
အဲတော့ ဒီ သဘာဝတရား ဓမ္မ ဆိုတာတွေဟာ မဖော်ထုတ်ရင် မသိဘူး။ ဖော်ထုတ်တဲ့သူရှိမှ သိမှာ။ အဲလို ဖော်ထုတ်တာကလည်း ရိုးရိုးတန်းတန်းသာမန်လူမရဘူးတဲ့။ လေးသင်္ချေနဲ့ ကမ္ဘာတစ်သိန်းပါရမီဖြည့်လာတဲ့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာလို လူပဲရမှာ။ အဲဒီလို ဖော်ထုတ်လိုက်တဲ့ တရားတွေဟာလည်း ရတနာတွေ။ ရတနာတွေဆိုတာ လူတိုင်းသုံးနိုင်ပါ့မလား ? မသုံးနိုင်ပါဘူး ဘုရား။ ရတနာ ဆိုတာ အတုလံ ဒုလ္လပတ် ဒသနံ ။ တွေ့ ဖို့ ခဲယဉ်းတာ ရတနာ။ ဓမ္မ ဆိုတာလည်း ရတနာပဲ။
ဒီပင်္ကရာ မြတ်စွာဘုရားပွင့်ပြီးနောက် မရေမတွက်နိုင်တဲ့ အသင်္ချေပေါင်းများစွာ ကမ္ဘာတွေလွန်ပြီးနောက် မင်္ဂလ ဘုရားပွင့်တယ်။ အဲဒီ ဘုရားနှစ်ဆူကြားထဲက ကာလမှာ ဓမ္မ ဆိုတာ ပျောက်ကွယ်သွားတယ်။ ဓမ္မံသရဏံ ဂစ္တာမိ ဆိုတာ မရှိတော့ဘူးတဲ့။ ဒီပင်္ကရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာ ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော် သုမေဓာရသေ့ က ဘုရားဆုပန်တယ်။ အဲဒီနောက် လေးအသင်္ချေနဲ့ ကမ္ဘာတစ်သိန်းကြာပြီးမှ ဘုရားပွင့်တယ်။ အဲဒီကြားထဲမှာ ရေတွက်လို့ မရတဲ့ အသင်္ချေပေါင်း ၄ ခါကြုံလို့ လေးအသင်္ချေလို့ ခေါ်တာ။ နောက် ရေတွက်လို့ ရတဲ့ကမ္ဘာက တစ်သိန်း။ ဒီပင်္ကရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ကောဏ္ဍညမြတ်စွာဘုရားကြားမှာ တစ်သင်္ချေ။ ကောဏ္ဍညမြတ်စွာဘုရားနဲ့ မင်္ဂလ မြတ်စွာဘုရားကြားမှာ တစ်သင်္ချေ။ သောဘိတမြတ်စွာဘုရားနဲ့နာရဒမြတ်စွာဘုရားကြားမှာ တစ်သင်္ချေ ၊ အနောမဒဿီမြတ်စွာဘုရားနဲ့ ပဒုမုတ္တရမြတ်စွာဘုရားကြားမှ တစ်သင်္ချေ တဲ့။ အဲဒီတော့ ဓမ္မ ဆိုတာ ဘယ်လောက်တန်ဖိုးရှိသလဲ စဉ်းစားကြည့်။ တွေ့ ဖို့ လွယ်လား။ မလွယ်ဘူးနော်။ ခဲယဉ်းတယ်။
အဲဒီတော့ ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားမတိုင်မှီ ကဿပ မြတ်စွာဘုရားရှင်အထိ အားလုံးပေါင်း ၂၄ ဆူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့ ပွင့်တော်မူခဲ့ကြတယ်။ ပေါတမမြတ်စွာဘုရားကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါ ၂၅ ဆူ။ ဒီပင်္ကရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ တူတူပွင့်တာက ၃ ဆူ။ အားလုံးပေါင်း ၂၈ ဆူ။ နှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူ ဆိုတာ အဲဒါပဲနော်။ ဂေါတမ ဘုရားအလောင်းဗျာဒိတ်ခံခဲ့တာက ၂၄ ဆူ။ ၂၄ ပါးပဲ ဗုဒ္ဓ ဆိုတာကိုတွေ့ ခဲ့ရတယ်။ အဲဒီ ၂၄ ပါးသည်သာလျှင် ဓမ္မကို ထုတ်ဖော်ဟောကြားနိုင်ခဲ့တယ်။ ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဓမ္မကို ထုတ်ဖော်ဟောကြားနိုင်ခြင်းမရှိဘူးတဲ့။
မြတ်စွာဘုရားကို ကိုးကွယ်တာဟာ စီးပွားတက်ချင်လို့ ကိုးကွယ်တာရှိတယ်။ ကြောက်လို့ ကိုးကွယ်တာရှိတယ်။ တစ်စုံတစ်ခုကြောင့်အကာအကွယ်လုပ်ချင်လို့ ကိုးကွယ်တာရှိတယ်။ မျိုးစုံပေါ့လေ။ ဘယ်လိုကိုးကွယ်ရမလဲ မှန်ကန်တဲ့စိတ်ထား ဘယ်လိုထားရမလဲဆိုတော့ ဘုရားဆိုသည်မှာ မိမိရဲ့ သန္တာန်ကျရောက်လာမဲ့ မကောင်းကျိုးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့ အကြောင်းတရားတွေကိုဖယ်ရှားပြီး ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုညွန်ပြပေးတဲ့အတွက် ကိုးကွယ်တယ်။ ဒီလိုနည်းနဲ့ ကိုးကွယ်ရမယ်နော်။
သဗ္ဗ ဗုဒ္ဓါ နုဘာဝေန၊
သဒါ သုခီ ဘ၀န္တု တေ။
အဲဒီဂါထာလေး အဓိပ္ပာယ်ကို ဘုန်းကြီးရှင်းပြမယ်။ သဗ္ဗ ဗုဒ္ဓါ နုဘာဝေန အလုံးစုံသောဘုရားရှင်တို့ ရဲ့ တန်ခိုးတေဇော အာနုဘော်တို့ ကြောင့် ၊ သဒါ အခါခပ်သိမ်း ၊ သုခီ ချမ်းသာ ၊ ဟောတု ဖြစ်ပါစေ။ ဒီလို တစ်ချို့ က အဓိပ္ပာယ်ပြန်ကြတယ်။ အဲဒီလို အဓိပ္ပာယ်ပြန်တော့ ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုရင် မြတ်စွာဘုရားရဲ့ တန်ခိုးအစွမ်းကြောင့်ချမ်းသာပါစေလို့ ဆိုတော့ ဘုရားက သူ့ ရဲ့ တန်ခိုးအာဏာ ပါဝါတွေကို အသုံးပြုပြီး သတ္တ၀ါတွေကို ကယ်တင်တယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်မရောက်ဘူးလား။ အဲဒီအဓိပ္ပာယ်ပြန်ဆိုချက်မမှန်ဘူး။ ဘယ်လိုပြန်ဆိုရမလဲဆိုတော့ သဗ္ဗ ဗုဒ္ဓါ နုဘာဝေန၊ အလုံးစုံသောမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့ ရဲ့ ဂုဏ်ကိုအာရုံပြုကာ ကိုးကွယ်ပူဇော်ရတဲ့အစွမ်း အာနုဘော်ကြောင့် ၊ သဒါ သုခီ ဘ၀န္တု တေ အစဉ် ထာဝရချမ်းသာသုခရပါစေ။ အဲလိုပြန်ဆိုမှ မှန်ကန်တယ်။ အဲလိုဆိုလိုက်တော့ ဘုရားကို အာရုံပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ကုသိုလ်ကိုပြောတာ။ ဓမ္မ ကိုပြောတာ။ ကုသိုလ် ဆိုတာ ဓမ္မပဲ။ ဓမ္မံသရဏံ ဂစ္ဆာမိ ဆိုတဲ့နေရာမှာ ဓမ္မ ကိုကိုးကွယ်ကျင့်သုံးမှ ဓမ္မံသရဏံ ဂစ္ဆာမိ လို့ မှတ်ရမယ်။
ဓမ္မ ကိုကျင့်သုံးလို့ ကိုယ်ချမ်းသာ စိတ်ချမ်းသာ ဖြစ်နေတဲ့လူတွေလည်းအများကြီး။ ဒါပေမယ့် အိုခြင်း နာခြင်း သေခြင်း ဆိုတဲ့တရားတွေကနေ မကျော်လွန်နိုင်သေးဘူး။ ဓမ္မ ရဲ့ စွမ်းဆောင်ချက်က နောက်ဆုံး ဒီ အိုခြင်း နာခြင်း သေခြင်း ဆိုတဲ့အရာတွေကို ကျော်လွားနိုင်မှ ဓမ္မ ဟာပြည့်စုံတယ် လို့ ပြောရမယ်။
အေး......ဓမ္မံသရဏံ ဂစ္တာမိ ဆိုတာ ဒီ့ထက်အဆင့်မြင့်သေးတယ်။ ဘ၀ကန္တာရ ကနေထုတ်ဆောင်ပေးတယ်တဲ့။ ဘ၀ကန္တာရ ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတော့ ဘုန်းကြီးတို့ သိထားတဲ့ဘ၀ကြီးဟာ ကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့ဘ၀လား ပြန်စဉ်းစားကြည့်။ လူမှုရေး စီးပွားရေးအခက်အခဲတွေက ထားပါတော့ လူတိုင်း ကြုံချင်မှ ကြုံကြမှာ။ ဒါပေမယ့် အိုခြား နာခြင်း သေခြင်း ဆိုတာတွေကတော့ လူတိုင်းကြုံမှာ။ အာဏာရှင်လည်း တစ်နေ့ အိုမှာပဲ။ အာဏာမရှိတဲ့လူလည်း တစ်နေ့ အိုမှာပဲ။ လူဝတ်ကြောင်လည်း အိုမှာပဲ။ ဘုန်းကြီးတွေလည်း အိုမှာပဲ။ အဲဒီတော့ အိုခြင်း နာခြင်း သေခြင်း ဆိုတာလည်း ကန္တာရတွေပဲ။ အဲဒီ ကန္တာရတွေကို ကျော်လွားနိုင်တဲ့လူရှိလား။ မရှိနိုင်ဘူး။ အဲဒါကို ဘ၀ကန္တာရလို့ ခေါ်တယ်။
အဲဒီ ကန္တာရတွေထဲက ကယ်ထုတ်နိုင်တာကတော့ ဓမ္မပဲတဲ့။ သဘာဝတရားတွေကိုသိအောင် ၊ သတ္တ၀ါဆိုတဲ့ အတွေးကို ပျောက်သွားအောင် သဘာဝတရားတွေချည်းသိရှိလာတာကို နာမရူပ ပရိစ္ဆေဒညဏ် လို့ ခေါ်တယ်။ ဒီသဘာဝတရားတွေဟာ ဆိုင်ရာဆိုင်ရာ အကြောင်းတွေကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုသိရင် ပစ္စယပရိဂ္ဂဟဥာဏ် လို့ ခေါ်တယ်။ အဲဒီကနေ တစ်ဆင့် သဘာဝအတွက် တရားတွေကို စဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါ သဘာဝတရားတွေဟာ ဖြစ်ပြီးတော့ ပျက်နေတာပဲလို့ အမြင်တွေမြင်လာပြီး ဒီသဘာဝတရားတွေဟာ ငြီးငွေ့ စရာပဲ ၊ ကြောက်စရာပဲ ၊ လန့် စရာပဲ ၊ ဒီသဘာဝတရားတွေကလွတ်အောင်ကြိုးစားမှပဲ ဆိုတဲ့ အသိဥာဏ်လေးဝင်လာလို့ ရှိရင် ဒါ ၀ိပသာနာဥာဏ် လို့ ခေါ်တယ်။
လောဘ ရယ် ဒေါသ ရယ် မောဟ ရယ် ဒီအကုသိုလ်တွေကလွတ်သွားတာကို ၀ိမုတ္တ လို့ ခေါ်တယ်။ စိတ်ကလေးဟာ အာရုံနဲ့ တော့တွေ့ တယ်။ ဒါပေမယ့် ထိုအာရုံရဲ့ ကြားထဲမှာလွတ်သွားတယ်။ အဲဒါ Glue မရှိတော့တာ။ စက္ကူလေးနှစ်ခုဟာ ထိတော့ထိနေတယ်။ ဆိုပါစို့ စာရွက်လေး ၂ ခုထိထားတယ်။ အဲဒီ စာရွက် ၂ ခုကြားမှာ ကော်မပါဘူးဆိုရင် ခွဲလို့ မရဘူးလား။ ရတယ်။ လူတွေရဲ့ စိတ်မှာ ခွဲမရဘူးဆိုတာက ကော် ပါနေလို့ ခွဲမရတာ။ ဟုတ်လား။ ကော်က ရိုးရိုးကောတောင်မဟုတ်ဘူး Super Glue ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီတော့ အာရုံနဲ့ စိတ်နဲ့ ဘယ်လိုပဲတွေ့ တွေ့ လောဘမလာဘူး ၊ ဒေါသမလာဘူးဆိုရင် ညှိနေပါ့မလား။ ဘယ်ညှိမလဲနော်။ အဲဒါကို ၀ိမုတ္တ လို့ ခေါ်တာ။ လွတ်သွားပြီလို့ ပြောတာ။ ဓမ္မ ကို Pratise လုပ်တယ်ဆိုတာ အဲဒီလိုလွတ်သွားပြီဆိုတဲ့အဆင့်ထိအောင် အားထုတ်ရမှာ။ အဲဒီလိုလွတ်သွားပြီဆိုရင် ဘ၀ဆိုတဲ့ ကန္တာရခရီးကြမ်းကြီးကိုနောက်ထပ်ရင်ဆိုင်စရာမရှိတော့ဘူး။ ရင်ဆိုင်စရာမရှိရုံတင်မကဘူး ၊ အသာသ ဒါနတဲ့ ။ သံသရာကြီးထဲမှာ ပင်ပန်းခဲ့ရတာတွေအကုန်လုံးငြိမ်းသွားတယ်။ အသောကံ ၀ရဇံ ခေမံ ဆိုတာ အဲဒီကျမှလာတာ။ စိတ်ကလေးမှာ လောဘလည်းမလာဘူး။ ဒေါသလည်းမလာဘူး။ မောဟလည်းမလာဘူး။ စိတ်ကလေးငြိမ်းချမ်းသွားပြီ။ ဓမ္မံသရဏံ ဂစ္ဆာမိ ဆိုတာ အဲဒီအဆင့်ထိရောက်အောင် သွားရမယ်တဲ့။
ရှင်သာရိပုတ္တရာ တို့ ရှင်မဟာမောဂ္ဂလန်တို့ ရဟန္တာတွေဟာဓမ္မံသရဏံ ဂစ္ဆာမိ ကို အပြည့်အ၀ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်လိုက်ကြသည့်အတွက်ကြောင့် နောက်ဆုံးမှာ နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားကြတယ်။ အေး...အဲဒါသည် အပြည့်ဝဆုံး အစစ်မှန်ဆုံး ဓမ္မံသရဏံ ဂစ္တာမိ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဓမ္မ ဆိုတဲ့နေရာမှာ မဂ်လေးတန် ဖိုလ်လေးတန် နိဗ္ဗာန် ဆိုတဲ့ လောကုတ္တရာ တရား ၉ ပါး။ အဲဒီ လောကုတ္တရာ တရား ၉ ပါးကို ကိုယ်ကိုတိုင်မျက်မှောက်ပြုရပြီဆိုရင် ဓမ္မံသရဏံ ဂစ္တာမိ ပြီးပြည့်စုံတယ်လို့ မှတ်။အဲဒါတွေအတွက် ဘယ်ကစရမလဲဆိုတော့ သီလကျင့်တာသည်လည်း ဓမ္မံသရဏံ ဂစ္ဆာမိ ပဲ။ ဒါန ကောင်းမှုလုပ်တာသည်လည်း ဓမ္မံသရဏံ ဂစ္ဆာမိ ပဲ။ စိတ်ကောင်း နှလုံးကောင်း ထားတာသည်လည်း ဓမ္မံသရဏံ ဂစ္ဆာမိ ပဲ။ အားလုံးဟာ ဓမ္မံသရဏံ ဂစ္ဆာမိ ထဲအကျုံးဝင်တယ်။သို့ သော်အဲဒါတွေဟာအခြေခံအဆင့်တွေလို့ အောက်မေ့ထား။
ဒါကြောင့်တရားနာပရိတ်သတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ ကလည်း ဓမ္မံသရဏံဂစ္ဆာမိ ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကိုသေသေချာချာသဘောပေါက်နားလည်ပြီးသကာလ ဒို့ တရားကိုကိုးကွယ်သည်ဆိုသည်မှာ တရားအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးလိုက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ နားလည်ပြီး ဓမ္မံသရဏံ ဂစ္ဆာမိ တရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြစေကုန်သတည်း။